Makore gumi mushure mekuuya kweThunderbolt, iyi ichiri imwe nzira yekukurumidza kune USB | Linux Vakapindwa muropa
Makore gumi mushure mekuuya kweThunderbolt, iyi ichiri imwe nzira yekukurumidza kune USB
Intel Thunderbolt Technology inoshandura gumi gore rino, uine debuted paApple's 2011 MacBook Pro uye kunyange izvo zviri kure nekuwana budiriro iyo kambani yaitarisira, Kutinhira zviri pachena kuti zvichiri kuchengetwa kune niche musika nhasi.
Nekudaro, pagore regumi regumi tekinoroji, Intel iri kutora nzira nyowani izvo zvinofanirwa kukubvumidza iwe kuvhura Thunderbolt kune vakawanda vateereri, sezvo Intel yakabatanidza Thunderbolt yakananga muchizvarwa chayo chazvino chevashandi veCore processor, inonzi Tiger Lake, nokudaro ichibvisa mutero uyo vanobhadharwa nevagadziri vePC kuti vauwane.
Kune avo vasingazive nezveThunderbolt, iwe unofanirwa kuziva kuti iyi i Ultra-inokurumidza mhando yekubatanidza yePC, ine basa rakatanga muna 2007, zvichibva paIntel's Light Peak pfungwa.
Apple ingadai yakatanga kunyoresa chiratidzo cheThunderbolt, isati yapfuudza iyo kuIntel. Iyo tekinoroji yakatanga kushandiswa muMacBook Pro munaFebruary 2011 kuburikidza nechiteshi chakanangana neiyo mini DisplayPort yaive nematanho maviri aine bandwidth ye10 Gb / s imwe neimwe, ichibvumidza anosvika matanhatu maturusi kuti abatanidzwe muketani.
Intel yaitarisira Kutinhira kuve chishandiso chezuva nezuva yevashandisi vemakomputa, asi yakanga isiri.
Kutyaira kugamuchirwa kweiyi tekinoroji, Intel yakabatanidza Thunderbolt mu ake ekupedzisira Tiger Lake processors, zvinoreva kuti vagadziri vemakomputa vanogona kuwana Thunderbolt vasina kubhadhara imwe yekuparadzanisa machipisi machipisi Iine machipisi eIntel mukushandiswa kwakawanda, iyo Santa Clara yakasimba inoti Thunderbolt tekinoroji ikozvino ichave nemusi wayo wezuva.
Muchokwadi, kune vanhu vazhinji, zvishandiso zveUSB zvinoshanda, asi vashandisi "vakakomba" vanoda kushanda kwakakwana uye kuvimbika, chimwe chinhu icho USB chaisazopa.
Uye kubatsira kweThunderbolt kwaizonyanya kukosha kupfuura nakare koseSevazhinji uye vazhinji vanogadzira malaptop vanopa akaonda matete emakomputa ane mashoma madoko. Zvichienderana nezvinotsanangurwa, Thunderbolt ports inopa nekukurumidza uye kwakasiyana-siyana kubatana kune ekunze ekuchengetedza zvishandiso, monitors, network adapters, uye nezvimwe, uyezve ivo vanogona kutsiva zviteshi zveHDMI, DisplayPort, Ethernet, uye simba.
Somuenzaniso, mutinhimira mutsva 4 unotarisirwa, yakaziviswa kuCES 2020, bvumira izvo zviteshi zvekumisikidza uye multiport hubs zvinopa matatu maThunderbolt chiteshi pane imwe chete.
Intel inovimba neese ayo maficha, pamwe nehunyanzvi hwaanofungidzira, kutaura kuti Thunderbolt ichakunda pamusoro peUSB makore gumi aya.
"Ini ndinotarisira kuti panosvika 2022, Thunderbolt ichave iriko mune inopfuura 50% yePC dzakatengeswa," akadaro Jason Ziller, anotungamira zvigadzirwa zveIntel zvekubatanidza, achiwedzera kuti inopfuura hafu yemalaptop achaunzwa gore rinouya Vacha "zvechokwadi" uuye nayo tekinoroji.
Nekuda kweizvi, vaongorori vanofungidzira kuti Thunderbolt ine mukana wekupararira zvakanyanya muna 2022. Izvi zvinonyanya kuitika kana iyo Alder Lake chizvarwa chemachipisi, mutsivi weTiger Lake, akabatanidzwa mumahwindo ePC ayo nhasi asingashandise maTurnderbolt-akashongedzerwa processor. Thunderbolt iriwo chikamu cheIntel's "Evo" brand kusimudzira malaptop ekumusoro-soro ayo Intel anoona seane simba uye anopindura nehupenyu hwakanaka hwebhatiri. Iko kusanganiswa kwezvinhu zviviri izvi kwaizobatsira Thunderbolt kuti ibudirire munyika mune USB inotonga.
Zvakare, zvakakosha kuti uzive izvo Kutinhira kwaimbokurumidza kupfuura USB pakutamisa data, asi USB iri kugadzirisa zvishoma nezvishoma. Iyo itsva vhezheni yeUSB, USB 4, kunyangwe isingawanzo kuwanikwa muzvigadzirwa kusvika parizvino, inogona kuenderana neThunderbolt's 40 Gb / s.
Zvisinei, Kutinhira kunotarisirwa kunge kuchikurumidza mukuburitswa mune ramangwana, uko kunogona kupa mukana mutsva wekumhanya zvakakomba, kuvimbika uye zvimwe kugona. Kana iyo yakanyanya bandwidth yeThunderbolt 4 iri 40 Gb / s, mainjiniya eIntel vanofungidzira kuti Thunderbolt 5 inogona kusvika ku80 Gb / s.
"Nhasi dhata redu rebhazi bandwidth muThunderbolt 4 inoenderana nePCIe Gen 3 × 4 mashandiro, uye kune mamwe mafomu edu ekuchengetera tinoona kuti kumhanyisa kwekuchengetedza mune iyi fomu fomu kwakatowedzera zvakapetwa."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Makore gumi mushure mekuuya kweThunderbolt, iyi ichiri imwe nzira yekukurumidza kune USB
Collabora akatotanga kushanda pakubvumidzwa kweye Gallium D3D12 controller